काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाललाई साहसिक पर्यटनको केन्द्रबिन्दुका रुपमा स्थापित गर्न सबै पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले आज ...
kharibot.com . १२ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बेपत्ता विमानका दुई सम्भावित ठाउँ, पाइलटको फोन लाग्यो !
काठमाडौं । सम्पर्कविहीन बनेको तारा एयरको ट्विनअटर विमानबारे सम्भावित दुई ठाउँको पहिचान भएको छ । जहाज मुस्ताङको टिटी लेक वरपर र लार्जुङ क्षेत्रलाई सम्भावित क्षेत्र मानेर खोजी गर्ने तयारी भइरहेको मुस...
kharibot.com . २४ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
आईपीएल फाइनल- राजस्थानका तीन खेलाडी गुजरातका लागि खतरनाक
समृद्ध नेपाल निर्माणमा अघि बढ्नुपर्छ- नेपाल
काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहित समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अगाडि ...
kharibot.com . २७ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
लार्जुङबाट पनि फर्कियो आर्मी- उद्धार अन्योलमा
पोखरा । जहाज दुर्घटना भएको आशंका गरिएको लार्जुङबाट आर्मी फर्किएको छ । केही समयअघि त्यसतर्फ गएको आर्मीको टोली कोवाङतर्फ नै फर्किएको हाे । अझै दुर्घटनास्थल एकिन हुन सकेको छैन । लार्जुङका स्थानीय शिक...
kharibot.com . ३४ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
ट्रक व्यवसायी आन्दोलित- २० जेठदेखि लुम्बिनीका ट्रक नचल्ने
भैरहवा । सरकारले सात वर्षअघि समायोजन गरी ताेकेको भाडादर अझै कार्यान्वयन नगरेकाे भन्दै ट्रक व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । तत्काल उक्त भाडादार कार्यान्वयन नभए २० जेठदेखि लुम्बिनी क्षेत्रका ट्रक व्...
kharibot.com . ३९ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बंगलादेशमा रुखमा बस ठोक्किदा ८ जना मृत्यु, २० जना घाइते
ढाका । ढाकाबाट करिब १८० किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित बरिसाल जिल्लामा आइतबार बिहान यात्रीले खचाखच भरिएको एउटा बस रुखमा ठोक्किँदा कम्तिमा आठ जनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य २० जना घाइते भएका छन् । रातभरको...
kharibot.com . ४१ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बन्दुकको पहुँच भएका युवामा आत्महत्या प्रयासको जोखिम उच्च
काठमाडौं । बन्दुकको पहुँच भएका किशोर/किशोरी आत्महत्या वा आत्महत्या प्रयासको उच्च जोखिममा हुने एउटा नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ । जुनसुकै कारणले अस्पतालको आकस्मिक विभागमा आउने एक तिहाई अमेरिकी वयस्कम...
काठमाडौँ । गठबन्धन सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज अपराह्न ४ बजे बस्ने सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८...
kharibot.com . ५४ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बेपत्ता जहाजमा अर्का पाइलट पनि थिए, जो बिदा मनाउन जोमसोम जाँदै थिए
काठमाडौं । आइतबार सम्पर्कविहीन तारा एयरको जहाजमा चालक दलका तीन जना सदस्यसहित २२ जना यात्रु सवार थिए । जसमा दुई जना तेस्रो मुलुकका र चार जना भारतीय नागरिक थिए । उक्त जहाजमा तीन जना चालकदलका सदस्यसहि...
kharibot.com . ५७ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
विदेशमा नेपाली सिनेमाका गतिविधि बढ्दै
kharibot.com . ५९ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बाराका केरा बेच्न किसानहरू आफै सडकमा उत्रिए
बारा । कोरोना प्रभावपछि जारी लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण थला परेका बाराका केरा किसान अहिले थप समस्यामा परेका छन् । बिचैलियाले आफूखुसी केराको मूल्य निर्धारण गरेर केरा किन्दा किसानहरू समस्यामा परेका ...
लार्जुङका शिक्षक विरेन्द्र भन्छन्- विमानको आवाज सुनेका थियौं, आर्मीको टिम जाँदै छ
पोखरा । पोखराबाट आइतबार बिहान मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज लार्जुङ आसपास दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ । त्यहाँका एकजना शिक्षक वीरेन्द्र लामिछानेका अनुसार लार्जुङमा एसेम्ब्ली गर्ने...
आपिएल- गुजरातको लक्ष्य ‘डेब्यु’मै उपाधि
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२२ टी-२० प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज (आइतबार) राति गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । अहमेदावाद स्थित नरेन्द्र मोदी रंगशालामा ...
प्रतिद्धबता पूरा गर्न सबै लाग्नुपर्छ- मुख्यमन्त्री भट्ट
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सङ्घीय लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रिक व्यवस्था ल्याउँदा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । धनगढीमा आज आयोजित ...
कर्णाली । कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले संविधानमा परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा ऊर्जा मिलोस् भनी शुभकामना व...
kharibot.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
सलमानका सोख के-के छन् ?
काठमाडौं । बलिउडका सुल्तान सलमान खान फिल्म दुनियाँमा सबैभन्दा ठूलो सुपरस्टार हुन् । आफ्नो फिल्ममा भयंकर एक्सनका लागि प्रख्यात सलमान केही फरक कुरामा शौखिन छन् । चाहे त्यो शरीर बनाउने मामलामा होस् या...
गणतन्त्रलाई सुदृढ र सफल बनाउनुपर्छ- मुख्यमन्त्री राई
मोरङ। प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जनताको ठूलो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रणलाई सुदृढ र सफल बनाउनुपर्ने बताएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा १५औँ गणतन...
सरकारको बेपत्ता विमानको खोज तथा उद्धारमा सघाउन स्थानीयलाई आग्रह
काठमाडौँ । सरकारले मुस्ताङमा हराइरहेको तारा एयरको विमानको खोज तथा उद्धारमा सघाउन स्थानीय बासिन्दसँग अनुरोध गरेको छ । त्रिभूवन विमानस्थल कार्यालयले स्थल र हवाइमार्गबाट विमानको खोजी भइरहेको उल्लेख ग...
माल्दिभ्समा उषाको टिमविरुद्ध कामना सम्मिलित पुलिसको जित
काठमाडौं । माल्दिभ्समा जारी भलिबल एसोसियसन कप २०२२ प्रतियोगितामा नेपाली महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी सदस्य कामना विष्टसम्मिलित पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा ...
काठमाडौँ । पोखरादेखि मुस्ताङ जाने क्रममा सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको ट्विनअटर जहाज खोज्न परिचालन गरिएको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर प्रतिकूल मौसमका कारण जोमसोम फर्किएको छ । मौसम खुल्दासाथ खोजीकार्य...
रियो डि जेनेरियो । भारी वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीमा परेर उत्तरी ब्राजिलमा कम्तीमा पनि ३७ जनाको ज्यान गएको छ । उत्तरी ब्राजिलको रेसिफ सहर र त्यस वरपरको भारी वर्षाले ती नागरिकको ज्यान गएको यहाँका अध...
बारामा सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध आन्दोलन चर्किदै
काठमाडौँ । श्वेत–गङ्गा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्नसक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा कम्पनीले स्थानीयवासी...
काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कास्कीको पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाजको खोजीकार्यमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन् । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य,...
विमान बेपत्ता अपडेट- लेते क्षेत्रमा २ पटक घुमेको थियो जहाज !
पोखरा । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज सवा २ घण्टादेखि सम्पर्कविहीन नै छ । म्याग्दी कटेपछि जहाज बेपत्ता भएको बताइएको छ । मुस्ताङ थासाङ क्षेत्रका स्थानीयले उक्त जहाज त्यहाँ २ पटकसम्म घ...
भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । सोमबारदेखि देशभर एकैसाथ सुरु हुने परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्...
कार्तिक-कियाराको भूलभुलैया- २ सय करोड क्लबमा
काठमाडौँ । बलिवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन र कियारा आडवाणी अभिनिती फिल्म भूलभुलैया-२ ले बक्स अफिसमा शानदार कमाई गरिरहेको छ । गत शुक्रबार रिलिज भएको भूलभुलैया-२ सय करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ । शनिबा...
भैरहवा । शनिबार राति र आइतबार बिहान केहीबेर परेको पानीले भैरहवा जलमग्न भएकोे छ । वर्षाले मुख्य बजार बैंकरोड, मिलनचोक, सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने देबकोटा चोक लगायतका क्षेत्र जलमग्न भएका छन् । ...
मुस्ताङका सिडिओ भन्छन्- टिटीतिर आवाज आएको भनेर सूचना पाएका छौं
पोखरा । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज मुस्ताङ स्थित टिटी डाँडातिर दुर्घटना भएको हुन सक्ने बताइएको छ । लेतेनजिकै टिटी डाँडामा ठूलो आवाज आएको सूचना स्थानीयले दिएका मुस्ताङका प्रमुख जिल...
गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई समृद्धिको बहसमा केन्द्रित गरौँ - ओली
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धितर्फको बहसमा केन्द्रित गर्न सफल भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले आपसमा निराशा बाँडेर...
गोरखा नगरपालिकाको कार्यपालिकामा कांग्रेस-एसको उम्मेद्वारी, अन्य दलले उम्मेदवारी नै दिएनन्
गोरखा । यही १९ जेठमा हुने कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनका लागि गोरखा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मात्र उमेद्वारी परेको छ । आठ जना सदस्य पदको निर्वाचनका लागि मनोनयनको अन्तिम...
हराएको विमान मुस्ताङको लेतेमाथि दुर्घटना भएको आशंका
विमान बेपत्ता अपडेटः को को थिए यात्रु र चालक दल ?
पोखरा । पोखराबाट उडेर बेपत्ता भएको जहाजमा चालक दलसहित २२ जना रहेको खुलेको छ । चालक दलका तीनसहित १९ यात्रु गएको विमानस्थलले जनाएको छ । चालक दलमा क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे र उत्सव पोखरेल तथा एयर होस्...
विमान बेपत्ता अपडेट- म्याग्दी कटेर धवलागिरीतर्फ मोडिएको थियो विमान
पोखरा । पोखराबाट उडेको जहाज सम्पर्कविहीन भएको छ । तारा एयरको जहाज १७ मिनेटमा पुग्नुपर्नेमा डेढ घण्टासम्म सम्पर्कमा नआएपछि अहिले खोजी सुरु भएको छ । म्याग्दीका स्थानीयको अनुसार उक्त जहाज म्याग्दी कट...
विमान बेपत्ता अपडेटः १९ यात्रु लिएर उडेको थियो
पोखरा । जोमसोमका लागि पोखराबाट तारा एयरको ट्वीनअटर विमान ९ बजेर ५५ मिनेटमा उडेको थियो । यहाँ १७ देखि बढीमा २० मिनेटमा जहाज पुग्छ । तर, जहाज उडेको १ घण्टासम्म पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन । विमानस्थलक...
kharibot.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोमतर्फ उडेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भएको छ । पोखराबाट बिहान ९ बजेर ५५ मिनेटमा उडेको विमान सम्पर्कविहीन भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानमा चालक दलका स...
काठमाडौँ । दुई वर्षदेखि पर्यटकका लागि बन्द रहेको जापानले ९८ देश र क्षेत्रका पर्यटकका लागि आफ्नो सिमाना खुला गरेको छ । तर, केही प्रतिबन्ध भने अझै जारी राखिएको छ । जापानले काेभिड भाइरस नियन्त्रणका ला...